Kaararka Debit-ka Bitcoin ee ugu Fiican 2022 - Kiiky Wealth
Bogga ugu weyn Kaararka Debit-ka Bitcoin ee ugu Fiican 2022
Kaarka debit-ka ee bitcoin wuxuu kuu ogolaanayaa inaad u isticmaasho cryptocurrency-gaaga sida aad ugu bixin lahayd lacag caddaan ah oo joogto ah akoonkaaga bangiga. Iyo sida kaarka deynta caadiga ah mar kasta oo aad isticmaasho, lacagta waxaa laga jarayaa akoonkaaga bitcoins. Oo loo beddelo lacag baayacmushtar sida Doolarka Maraykanka, Yuuro, iwm
Kaarka deynta crypto wuxuu kuu ogolaanayaa inaad ku bixiso hantidaada dhijitaalka ah meelaha laga aqbalo kaararka deynta. Mar kasta oo aad isticmaasho kaarka crypto, lacagta waxaa laga jarayaa baaqigaaga boorsada waxaana loo rogaa lacagta ganacsadaha.
Maqaalkani waxa uu kaa caawinayaa in aad doorato kaadhka deynta Bitcoin kaas oo adiga ku shaqeeya kaas oo laga heli karo degaankaaga. Qaar ka mid ah kaadhadhkan lacag-bixinta bitcoin waxay ku xaddidan yihiin dalal gaar ah
Waa maxay Kaararka Debit-ka Bitcoin?
Bitcoins kuwaas oo sameeyay cinwaannada 2022
Sideen Ku Heli Karaa Kaarka Debit Seeraar?
Kaarka Debit ee BitCoin ma badbaado yahay?
Halkee ayaan ka isticmaali karaa Kaarka Debit ee BitCoin?
Kaarka deynta Bitcoin wuxuu u ogolaanayaa dadka inay iibsadaan oo ay kala baxaan lacag caddaan ah ATM-yada iyagoo isticmaalaya Bitcoin. Dhib malahan haddii iibiyaha iyo ATM-ka aysan aqbalin cryptocurrency, si kastaba way shaqeysaa.
Halkii ay Bitcoin ugu beddelan lahaayeen lacagaha maxaliga ah ee haysta kaadhka hore waxay ku soo shubaan kaarkooda lacag-bixineed oo leh qaddar gaar ah oo cryptocurrency ah oo si toos ah loo beddelayo wakhtiga wax iibsiga.
Kaarka deynta Bitcoin wuxuu la socdaa fursado badan. Tusaale ahaan, waxa ay ku dallacaa xoogaa lacag ah oo waxa ay la timaadaa abaal-marin cashback ah iyo apps mobile. Waxay kaloo taageeraan noocyo badan oo cryptocurrencies ah sida Bitcoin, Ethereum, iyo bitcoin.
Kaarka deynta bitcoin waxa uu la socdaa sifooyin ammaan oo adag si ay uga caawiyaan ilaalinta lacagaha.
Hoos waxaa ku yaal BitCoin taasoo samaysay cinwaannada 2022.
Akhri: 15-ka Boorsada Bitcoin ee ugu Fiican 2022
Coinbase waa app kuu ogolaanaya inaad ku bixiso crypto-kaaga meel kasta. Waxaa la aasaasay 2012. Waxay taageertaa ilaa 9 cryptocurrencies oo ay ku jiraan Bitcoin, Ethereum, iyo Litecoin.
Waa kaadhka deynta fiisada oo ay maalgeliso hadhaaga coinbase. Coinbase waxay u fiican tahay maalgashadayaasha crypto ee hay'adaha maskaxda ku haya. In kasta oo kaarkeeda debit-ka aan weli laga bilaabin adduunka oo dhan, haddana waxay u oggolaanaysaa isticmaaleyaasha inay ku qaataan hanti kasta oo crypto ah faylalka ay ku jiraan oo ay ku kasbadaan abaalmarinno iibsi kasta.
Waxay taageertaa ilaa sagaal cryptocurrencies oo kala duwan waxayna soo bandhigaysaa ammaan adag laakiin waxay u baahan tahay akoon sal qadaadiic ah. Taasi waa sababta ay ugu fiican tahay
Kaarka xannibaadda waxaa soo saartay shirkadda tignoolajiyada maaliyadeed ee Ternio. BlockCard waa kaarka debit Visa kaas oo u ogolaanaya dadka haysta kaarka inay wax ku iibsadaan cryptocurrency dookhooda meel kasta oo Visa laga aqbalo.
XIDHIIDHKA: 10ka Bedel ee ugu Fiican ee Coinbase
Waxa lagu kala soocay mid ka mid ah kaadhadhka ku dalaca kharash yar sababtoo ah maqnaanshaha khidmadda maamulka, wax dhigaal ah, beddelaad, ama kharash ka bixid ah.
Kaarkani waxa uu taageeraa in ka badan 13 arka lacagta crypto oo ay ku jiraan Litecoin, Ethereum, Bitcoin, Stellar Lumens, iwm.
Shirkaddu waxay ku dallaci $10 khidmad hawlgelin ah iyo sidoo kale khidmad maamulka bishiiba ah $5 (shuruudaha) iyo $3 oo ah ka-saarista lacagta caddaanka ah ee ATM-ka gudaha; $3.50 caalami ah.
Si aad u isticmaashid kaarka Block waa inaad soo iibsataa Ternio Tokens oo loo yaqaan TERNS ama cryptocurrency oo loo beddelo lacag fidsan inta lagu jiro wakhtiga iibka.
Wirex waa madal lacag bixinta dhijitaalka ah oo la aasaasay 2014. Shirkaddu waxay sii daysay kaarka deynta cryptocurrency ee Visa-taageertay hal sano ka dib. Kaadhku waxa uu abaal-marin ku bixiyaa WXT.
Wirex ayaa la magacaabay sababtoo ah kaarka Wirex wuxuu taageeraa 25 cryptocurrencies iyo ku dhawaad ​​​​darsin lacag ah oo fiat ah oo Yurub ah iyo dhowr waddan oo Aasiya iyo Baasifigga ah iyo Mareykanka
Kaarka haystayaashu ma bixiyaan kharash bixin, bille, ama ka-noqosho, kaliya 1% khidmad si ay ugu maalgeliyaan xisaabaadka cryptocurrencies.
Kaarka Wirex waa mid ka mid ah kaararka dhowrka ah ee bixiya abaal-marin lacageed oo dhan 2% cashback cryptocurrency. Waxa jira geyn caadi ah oo bilaash ah oo aan lahayn wax kharash ah dayactirka ama dib u soo saarista kaarka. Wirex Visa waxay bixisaa lacag la'aan ATM-ka-baxa ilaa $300 bishii.
Si ka duwan cryptocurrency oo bixisa faa'iidooyin, Wirex uma baahna dheelitirnaanta ugu yar si loo helo abaalmarinno.
BlockFi waa doorasho cajiib ah oo loogu talagalay macaamiisha raadinaya kaarka deynta Bitcoin oo leh faa'iidooyin badan. Waxaa la bilaabay fiisihii ugu horreeyay ee bitcoin credit card bishii Luulyo 2021 oo tan iyo markii ay samaysay mowjado
Kaarku wuxuu bixiyaa 15% cashback halkii Bitcoin oo ay la socoto abaal-marin Seeraar oo gunno ah. Gunnadani waxay kordhisaa ilaa 3.5% saddexda bilood ee ugu horreeya lahaanshaha kaadhka ilaa ugu badnaan $100. Kaliya waxay taageertaa bitcoin.
Akhri: Dib -u -eegista Daacadda ah ee StartMiner 2022: Khiyaano kale oo Macdanta Bitcoin ah?
Bitpay waa kaadhka kale ee bitcoin ee dadka ku nool Maraykanka. Kaarkaan wax lacag ah oo lagu sarifayo ma jiro gudaha Mareykanka waxaana loo isticmaali karaa meel kasta oo MasterCard laga aqbalo.
Kaarka deynta Bitpay ayaa laga bilaabay Maraykanka oo keliya 2016 oo tan iyo markaas wuu shaqaynayay. Kaadhadhka deynta ayaa taageera 62 lacag oo ay ku jiraan bitcoin iyo Ethereum iyo sidoo kale 8 lacagood oo fiat ah.
Waxay taageertaa lacagta tufaaxa iyo sida uu dhawaan ugu daray ikhtiyaarka kaadhka casriga ah ee cusub isagu kuma dalaco kharashka wax kala iibsiga wax iibsiga ee lagu sameeyo xuduudaha Maraykanka.
Taa beddelkeeda, waxay ka qaadaysaa 3% ilaa 2 qof oo kaararka u safraya dibadda si ay u daboosho kharashka lacagta.
Kaarka Bitpay waxa uu leeyahay wax kala iibsiga ka sareeya iyo dheelitirka xad marka loo eego kaararka kale ee cryptocurrency si loo codsado waxaad u baahan tahay lambarkaaga sooshal sekuuritiga iyo shatiga darawalnimada mana u diri kartid kaarka sanduuqa.
Waxaan ku darnaa Crypto.com sababtoo ah sifooyinka iyo fursadaha weyn
Crypto.com waxay haysataa todobo kaadh oo fiisaha ah oo bir ah oo kala duwan kuwaas oo u oggolaanaya dadka haysta kaarka inay ku qaataan in ka badan 90 cryptocurrencies iyo in ka badan 20 lacag ah meel kasta oo kaarka Visa laga aqbalo.
Si aad u iibsato mid kasta oo ka mid ah kaadhadhka Crypto.com, dadka haysta kaarka waa in ay saami ku yeeshaan cadad ka mid ah calaamadaha CRO ee shirkadda waana in aad iibsatid crypto.com's CRO tokens.
Kaarka Crypto.com ee ugu caansan (oo la awoodi karo) $400 Ruby Steel kaarka wuxuu bixiyaa 2% dib u soo iibsi kasta, 100% dib u dhac ku yimaada rukunka Spotify ee sanadlaha ah, iyo wax lacag ah oo ATM-ka lagala baxayo ma jiro ilaa $400 bishii.
Kaarka haystayaasha aan doonayn in ay ku bixiyaan $400 kaarka Visa-ga waxa kale oo ay dooran karaan kaarka Midnight Blue ee Crypto.com, kaas oo bixiya 1% dib oo aan wax lacag ah ATM-ka ka bixin ilaa $200 oo lacag ah bishii.
Nuri waxaa la abuuray 2015. Waxaa laga heli karaa oo keliya Yurub. Kaarka deynta ee shirkadu wax caymis ah kuma dalaco bishiiba, wax lacag ah oo lagala bixi karo ma jirto, waxaana loo isticmaali karaa halka Visa la aqbali karo. Kharashka ATM-ka waxaa laga yaabaa inay dalacaan hawl-wadeenada qaarkood.
Waa kaarkii ugu horreeyay ee u oggolaanaya muwaadiniinta Yurub inay iibsadaan oo iibiyaan cryptocurrency iyagoo isticmaalaya akoonkooda bangiga. Kaarka waxa lagu keenay laba toddobaad gudahooda marka laga soo dalbado abka Nuuri.
Adeegyada koontada bangiga Nuuri waxay u ogolaataa macaamiisha inay iibsadaan oo iibiyaan Bitcoin iyo Ethereum iyaga oo isticmaalaya akoon bangi oo bixiya qaababka bangiyada mobilada caadiga ah.
Lacag kasta oo loo yaqaan 'cryptocurrencies' oo la iibsado waxaa loo rogaa Euro oo ku jira akoonnada Nuuri waxaana lagu geli karaa kaarka deynta Visa si sahlan loo soo gadan karo.
Kaarka deynta ee Nuri Visa waxa kale oo uu bixiyaa astaamo horumarsan oo 3D ah, taas oo u oggolaanaysa isticmaaleyaasha in ay hubiyaan lacag-bixinta onlaynka ah iyaga oo isticmaalaya biometrics, koodka moobilka, ama odhaah ammaan ah. Dadka kaadhka haysta waxa kale oo ay xannibi karaan kaarkooda xaalad degdeg ah ama waxa ay soo sheegi karaan in la xaday iyaga oo isticmaalaya app-ka Nuri.
Waxaa laga heli karaa Yurub kaliya, waxaad u baahan tahay akoon Nuri si aad u hesho kaarka waxayna taageertaa kaliya Bitcoin iyo Ethereum.
Waxaa la aasaasay 2017, Binance wuxuu u kacay inuu noqdo sarrifka cryptocurrency adduunka ugu weyn hal sano uun ka dib.56 2020, shirkaddu waxay iskaashi la sameysay Swipe si ay u bixiso kaarka debit Visa ee bixiya 8% cashback, taasoo ka dhigaysa doorashadayada sida ugu fiican ee cashback.7
Kaadhka Dal-ku-galka Binance wax lacag ah kama soo dalaco wax-soo-saar ama kharash bishiiba oo kaliya waxa uu ku dallacaa ilaa 0.9% khidmadda wax kala beddelashada iyo kala-baxyada ATM-ka. Ogsoonow in hawl wadeenada ATM-yada laga yaabo inay dalacaan kharash dheeraad ah. Kaarku wuxuu taageeraa 30 cryptocurrencies, oo ay ku jiraan Bitcoin iyo Ethereum.
XIDHIIDHKA: CryptoCurrency ma maalgashi wanaagsan baa? | Maalgelinta Cryptocurrency
Si la mid ah Coinbase, kaarka Visa Binance wuxuu ku hayaa cryptocurrency jeebkaada wuxuuna beddelaa kaliya waxa loo baahan yahay wakhtiga iibka. Kaarka waxaa loo isticmaali karaa in-dukaanka iyo wax iibsiga online meel kasta oo Visa laga aqbalo.
In kasta oo heerka lacagta caddaanka ah ee kaadhka Binance Visa Card uu yahay heerka ugu sarreeya ee aan la kulannay, waxay la timid qabasho. Kaarka haystayaashu waa inay lahaadaan dheelitirka 600 Binance Coins, oo loo yaqaan BNB, oo ay ku helaan abaal-marintooda cashback ee BNB. Laga bilaabo Sebtembar 2021, BNB waa $362.95, taasoo keenaysa 600-BNB maalgashi ilaa $217,770.
Ka sokow iibsashada dhaqameed ee online-ka ah ama leben-iyo-hoobiye, waxaad sida caadiga ah u isticmaali kartaa kaararka bangiga Bitcoin ATM-yada si aad lacag caddaan ah ugala baxdo lacagta gudaha.
Si aad u hesho kaarka deynta Bitcoin, waxaad u baahan doontaa boorsada Bitcoin ee la maalgeliyo oo leh bixiyaha kaadhka deynta Bitcoin. Ka dib markaad maalgeliso akoonkaaga, waxaad codsan kartaa kaarka bangiga Bitcoin.
Waxa laga yaabaa inaad hesho kaadhadhka farsamada iyo kuwa jirka labadaba si aad u hesho ammaan dheeraad ah markaad internetka wax ka iibsanayso.
Akhri: Sideen uga Iibsan karaa Bitcoin gudaha Nigeria 2022? Hagaha Bilowga Hantida
Waa ammaan in la isticmaalo kaararka deynta Bitcoin. Intooda badan waxay wataan sifooyin amni sida xaqiijinta laba-geesoodka ah, codesyada amniga, iyo iskaanka biometric sida faraha faraha.
Kaararka qaar ayaa xitaa bixiya kaarar sugan oo muhiim ah oo lagu ilaaliyo sirta firewall-ka. Iyo, sida kaadhadhka lacag-bixinta ee dhaqameed, waad joojin kartaa ama burin kartaa kaarka haddii aad ka shakido khiyaamo.
Kaarka deynta Bitcoin waxaa loo isticmaali karaa meel kasta iyadoo brandy la aqbalo. waxaa laga heli karaa Visa iyo Mastercard laba nooc oo kaarar ah oo loo isticmaali karo meel kasta oo adduunka ah.
Iibka tooska ah ee tooska ah iyo internetka ka sokow, kaararka deynta Bitcoin waxaa loo isticmaali karaa ATM-yada si lacag caddaan ah loogala baxo lacagta maxalliga ah.
Akhri: Waa maxay Macdanta Bitcoin sideese u shaqeysaa?
Kaararka debit-ka Bitcoin ee halkan lagaga hadlay dhammaantood waa kuwo gaar ah laakiin aan qummanayn. Taasi waa sababta aad u baahan tahay inaad samayso cilmi-baaris dhamaystiran ka hor intaadan dooran doorashadaada doorbidayso.
Sida Looga Iibsado Bitcoin Dalka Canada | Siyaabaha ugu Faa'idada Badan 2022
BITcoin waxay garaacday kaydka, badeecadaha si ay u noqdaan hantida ugu waxtarka badan 2022
Maqaalkan, waxaan wax badan ku sharxi doonaa Litecoin, sida ay u shaqeyso, sida loo iibsan karo,…
Sidee Looga Iibsadaa Crypto Webull?
Maqaalkani wuxuu ku bari doonaa dhammaan waxaad u baahan tahay inaad ka ogaato ku saabsan adeegsiga Webull broker platform si aad u hesho…
Markaa waxaad xiisaynaysaa cryptocurrency oo waxaad doonaysaa inaad u beddelato Bitcoin lacag caddaan ah ama waxaad doonaysaa inaad barato sida loo sameeyo…
Ethereum ma maalgashi wanaagsan baa? Wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ogaato
Lacagta loo yaqaan 'Cryptocurrency' ayaa ah kii ugu dambeeyay ee dunida ku qabsaday duufaanno, taasoo dadka ka dhigtay malaayiin iyo bilyaneer. Iyadoo…
Sida loo iibsado Eclipse Crypto Token (ECP)
Mid ka mid ah arrimaha ugu badan ee dadku la kulmaan markay isku dayayaan inay iibsadaan cryptocurrency waa inay ogaadaan sida loo…
Sida Loo Iibsado Cumrocket (CUMMIES) Lacagta Crypto
Haddii aad raadinayso sida loo iibsado cryptocurrency cumrocket, waxaad timid meeshii saxda ahayd. Maqaalkan,…